Sare u kac dhimasho oo laga soo sheegayo Muqdisho – Geelle Magazine
Waxaa sare u kac xooggan laga soo sheegaya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay Cudurka Covid 19 ee Soomaaliya.
Tiradii ugu dambeysay ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya shaacisey ayaa ahayd 835 kiis, taasoo laba laab ka badan halkii tiradaas ay mareysay 10 maalmood kahor. Tirada dhimashada ayaa iyana iminka mareysa 38 qof, sida ay wasaaraddu sheegtay.
Hase yeeshee dad badan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay intaas aad uga badan tahay, halka sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir uu dhawaan sheegay in boqolaal qof dad gaadhaya ay xanuunkan u dhinteen.
Dhanka kalena, waxaa soo baxaysa in tiro badan oo dad ah maalin kasta lagu aaso qubuuro kala duwan oo ku yaalla duleedka Magaalada Muqdisho. Sidoo kale dhawaan ayey ahayd markii Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, uu isna sheegay in cid kasta oo dhimata ay dowladda u aqoonsan tahay inuu coronavirus u dhintay.
Cudurka safmarka ah ee Coronavirus ayaa si saa’id ugu sii baahaya guud ahaan dalka, wuxuuna si siman u gaaray guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir intaba.